Manomboha amin'ny iBooks (I): Jereo aloha ny app | Vaovao IPhone
Betsaka ny olona manontany ahy raha matanjaka ny iPad ka afaka mamaky boky miaraka aminy. Faly aho, valiako fa eny, efa namaky boky maro tamin'ny takelaka Apple aho ary, na dia tsy dia tsara toy ny Kindle na ebook aza, dia mahavita manao zavatra marobe amin'ny fampiharana mety: iBooks. Apple koa dia nieritreritra ireo izay tia literatiora ary namolavola fampiharana ho an'ny fitaovana iOS (sy ho an'ny Mac miaraka amin'ny OS X Mavericks) hahafahan'ny mpampiasa rehetra mamaky boky (na PDFs) raha manoritra ireo teny mahaliana, mitady ny famaritana ny teny hafahafa na mizara teny nindramina hafa misaotra Twitter na Facebook.
Amin'ity andiana lahatsoratra ity dia hiresaka momba izay rehetra azontsika atao amin'ny App famakiana boky Apple: iBooks.
1 Jery ​​voalohany amin'ny iBooks
2 Manisy fanangonana sy famoahana boky
Jery ​​voalohany amin'ny iBooks
Aorian'ny fisintomana iBooks avy amin'ny App Store, dia hitantsika ity sary manaraka ity (tsy misy boky):
Araka ny hitanao dia afaka mahita izahay fa manana faritra 4 mazava izahay nampiavaka ny bokotra sy ny singa ny fampiharana:
Fividianana sy fametrahana: Raha te hividy boky isika dia tsindrio fotsiny ny "Store" dia handeha any amin'ny fivarotana iBooks izahay hividy ny boky rehetra tadiavinay. Rehefa mividy iray isika dia hiverina amin'ny efijery voalohany. Ny bokotra hafa, "Collections", dia ampiasaina hijerena ireo "tranomboky" samihafa ananantsika amin'ny iPad. Ohatra: "Harry Potter", "PDFs", "50 Shades of Grey" ...
Asehoy: Eo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ireo singa teo aloha ihany no azontsika atao ny manova ny fampisehoana ireo boky: ny fonony fotsiny (amin'ny endrika boky) na, amin'ny lisitra misy ny anaran'ny mpanoratra sy ny mampiavaka azy hafa ... Manana koa isika ny safidy hamindra ny fametrahana ireo boky amin'ny alàlan'ny fanindriana ny "Edit".
Search: Eo ambanin'ny anaran'ny fanangonana (amin'ity tranga ity "Boky") dia manana motera fikarohana ahafahana mitady ireo boky samihafa amin'ny iPad izahay, mitady ny mpanoratra, sokajy, lohateny ...
boky: Ny zava-dehibe indrindra momba ny iBooks. Ny ambin'ny efijery rehetra dia alain'ny boky ananantsika amin'ny iPad-nay.
Ka mandrosoa, efa nijery ireo singa lehibe ao amin'ny efijery iBooks lehibe izahay.
Manisy fanangonana sy famoahana boky
Amin'ity lahatsoratra voalohany natokana ho an'ny iBooks ity dia hiresaka zavatra roa tena manan-danja ihany koa izahay amin'ny filaharan'ny boky amin'ny fampiharana:
Manampia fanangonana ary ampio boky amin'izy ireo
Hanampy fanangonana sy hanampy boky:
Tsindrio «Fanangonana» ary avy eo amin'ny «Vaovao». Manoratra ny anaran'ny fanangonana anay izahay ary tsindrio OK.
Raha te-hanampy boky amin'ny fanangonana vaovao, mankanesa any amin'ilay toerana ananantsika ireo boky (rehetra) ary kitiho ny "Edit" (ambony ankavanana)
Misafidy ireo boky tianay hapetraka ao anaty fanangonana izahay ary tsindrio ny "Transfer"
Avy eo, mifantina ny fanangonana izay tianay ampiana amin'ireo boky ireo izahay, ary izany!
Fanovana ny filaharan'ny boky ao anaty fanangonana
Raha te-hanova ny filaharan'ny boky ao anaty fanangonana ao amin'ny iBooks izahay dia ampiasao fotsiny ilay Drag and Drop izay mahazatra. Tsindrio vetivety eo amin'ny fonon'ny boky ary afindra mandra-pahatongantsika any amin'ilay toerana irina.
Miandry anao amin'ny lahatsoratra manaraka momba ny iBooks aho!
Fanazavana fanampiny - Google Play Books dia havaozina miaraka amin'ny fahafaha-manofa boky
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Manomboka amin'ny iBooks (I): Jereo aloha ny app
Fandraisana anjara mahaliana. Saingy, misy mahalala ve ny fomba ahafahako mametraka pdf mitsivalana na mivelatra amin'ny ibooks ???
Tonga mitsivalana aho rehefa mamadika ny iPad ...
Angamba mbola tsy nanazava tsara ny momba ahy aho. Matetika aho manova sary sy karazana antontan-taratasy hafa ho endrika PDF; Rehefa manondrana ny antontan-taratasy pdf noforonina tao amin'ny iBooks aho, dia hita mijidina tampoka hatrany izy io, ka misy sary na antontan-taratasy toa "mitongilana".
Heveriko fa ny olana dia avy aminao tsy manome azy ny orientation marina rehefa mamorona PDF. Efa nanandrana izany ve ianao?
Raha ny mahazatra dia avadiko avy amin'ny iPad mihitsy izy ireo amin'ny fampiharana mpanova PDF, ary tsy ampiharina io safidy io.
Misaotra tamin'ny tolo-kevitra.
Mpanaraka anao sy compi miasa 😉
Mandatsaka tolo-kevitra aho. Izy io dia ny fanatanterahana fampianarana tsara sy feno iBooks Mpanoratra. Betsaka amintsika no maniry hanao zavatra mahaliana nefa ny marina dia very ny tenanao amin'ny farany. Raha ity tutorial ity dia azo nameno tamin'ny horonan-tsary momba ny fomba fanaovana ny tsirairay amin'ireo "zavatra" nanazava na mivantana ny Video Tutorial dia efa "La Leche" :-)) …………………… Ampirisiho ireo izay afaka manao zavatra toa ity
Manoratra izany aho satria mety ho fanabeazana lehibe ...
Misaotra amin'ilay hevitra
Tsara, manamarika izahay. Misaotra tamin'ny tolo-kevitra !!!
Tamin'ny 26 Aogositra 2013 09:57 alina dia nanoratra i Disqus:
Misaotra an nareo roa nandinika an'io !!!
Hihaino tsara ny famoahana an'io Tutorial manaraka io izahay.
Amin'ny inona no afaka manampy anao mila manontany fotsiny.
Te ho afaka hisafidy ny lokon'ny iPhone manaraka ve ianao?